အကျဉ်းချလို့ မရတဲ့ ယုံကြည်ချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » အကျဉ်းချလို့ မရတဲ့ ယုံကြည်ချက်	16
အကျဉ်းချလို့ မရတဲ့ ယုံကြည်ချက်
Posted by မစုဥာဏ် on Dec 26, 2014 in Poetry, Politics, Issues | 16 comments
မြူနှင်း ပျပျ ဆောင်းအလှ ကို ….. ငါ မှန်းဆမိတယ်။
မာကြော အေးစက်တဲ့ ကြမ်းပြင်ကို ကျောခင်း
ကြွက်တွေ၊ ကြမ်းပိုးတွေ ကို မောင်းထုတ်ရင်း ….
အမေ့လက်ရာ ထမင်းဟင်းတွေ ကို တမ်းတ
ချစ်ခင်သူတွေ ကို ငါ လွမ်းလှတယ်။
မတရားမှုကို အံတု၊ ယုံကြည်မှု ကို အားပြုလို့ 
သံတိုင်တွေ နောက် ငါ ရောက်ခဲ့တယ်။
လွတ်မြောက်မှု ကို စတေး၊ အဲဒီ ယုံကြည်ချက် အတွက်
နုပျိုမှုတွေ ကို ငါပေးခဲ့ရတယ်။
ဖိ နှိပ် မှု စနစ်ကို တန်ပြန်၊ စစ်ဖိနပ်တွေ ကို အာခံပြီး
လွတ်လပ်မှု ကို အရင်းပြုလို့……
အာဏာရှင် တစ်စု ကို ငါ စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်။
ပုဒ်မတွေ ပလူပျံတပ်၊ ပြစ်မှုတွေ ထပ်ကာတိုးလို့ 
သံတိုင်တွေ နောက် ငါ့ ကို ပို့ ခဲ့တယ်။
နံရံတွေခြား၊ သံတိုင်တွေ ကြားမှာ
ငါ့ ခန္ဓာ ကို ဖမ်းချုပ် မလှုပ်နိုင်အောင် တုပ်ခဲ့ပေမယ့်…
မပြောလိုက်ရတဲ့ အမှန်စကားတွေ ကြောင့် ဦးနှောက် အပုပ်မခံနိုင်လို့
ငါ့ ယုံကြည်ချက်တွေ အတားဆီးမဲ့ ….. လွတ်မြောက်လို့ နေဆဲ။
နောင်လာနောက်သားတွေ လွတ်လပ်ရေးတေးဆိုဖို့…..
မှောင်မိုက်ညမှာ … ကြယ်တွေကို ငါဆက်လို့ ရေမယ်။
ချစ်သူတွေ နဲ့ ကွေကွင်း ငရဲတွင်းမှာ …
ငါ့ ယုံကြည်ချက်တွေ အတားဆီးမဲ့ လွတ်မြောက်လို့ နေဆဲ။
ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် လှမ်းဆက်လို့ ရှာမြဲ။
(သံတိုင်နောက်ကွယ်မှ သူရဲကောင်းများအား ဦးညွတ်လျှက် ) မစုဥာဏ်
၂၀၁၄၊ ဒီဇင်ဘာ လ ၂၅ ရက်
မစု ဥာဏ် has written 10 post in this Website..
View all posts by မစုဥာဏ် →	Blog
ခင်ဇော် says: ဟုတ်တယ်…!!
ခုချိန်မှာ သူတို့ ဘာပဲ လုပ်နေလုပ်နေ
သူတို့ ပေးးဆပ်ခဲ့တဲ့ လမ်းးကြောင်းးး တစ်ခု အတွက်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: အဲလို ပေးဆပ်သူတွေဟာ ဝေလည်းမွှေး ကြွေလည်းမွှေး တွေပါဘဲ။
ဒါပေသည့် စစ်အာဏာရှင်ကတော့ အခုလို ဆက်ပြီးစကားကိုအဆုံးသတ်လေသည်
” ဝေလည်းမွှေး ကြွေလည်းမွှေး သေလည်းအေး “
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: သံတိုင်အကွယ်ထဲ ရောက်သွားတာကိုတော့ အားနာလှပါတယ်
သူတို့ ဘဝ သူတို့ အမောတွေကို ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားမိပါတယ်
ဒါမယ့် သံတိုင်နောက် မရောက်အောင်
စိုက်လိုက်မတ်တပ် လုပ်နေနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ ရလဒ်
အဲ့ဒါလေး မြင်ချင်တာ ဆိုပါတော့. . .
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: မိုးသီးဇွန်ပေါ့..
၈၈ တွေထဲ ကျုပ်တော့သူ့အတွေးအခေါ်.. လေးစားမိ..
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ကျနော်ကတော့ …အူးမင်းကိုနိုင် ပဲ… အစွန်းမရောက်သောနိုင်ငံရေး ရှုမြင်ပုံနဲ့… မှန်မှန်လေး လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ မြင်မိတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 45
မစုဥာဏ် says: ကို အလင်းဆက် ပြောသလို၊ ထောင်နန်းမစံ အောင် ရှောင်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ ။
နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ တံတိုင်နောက်ရောက်ရသူတွေထဲမှာ တချို့ ကလဲ “မျက်ကန်းမျိုးချစ်” တွေပါပါတယ်။ မှန်သောစကားခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုခြင်း တူပေမယ့် စကားလုံးရွေးချယ်မှု၊ ပြောတဲ့ လေသံ စ တာတွေ က မငြင်သာတဲ့ အခါ၊ တခါလှုပ်ရှားပြီး တခါထဲ အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ သူတွေ၊ ထောင်ထဲမှာ အညတရ ကွယ်လွန်သွားရသူ နိုင်ငံရေးသမားတွေ လဲ အများကြီးပါ။
ခေတ်ကာလ မကောင်းခင်တုန်းက နိုင်ငံရေးစာအုပ်တစ်အုပ် လောက် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားရင်တောင် ပုဒ်မ အကြီးကြီးတွေ တတ်ပြီး ဖမ်းတတ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ အဖမ်းမခံရအောင် ရှောင်နိုင်ဖို့ ကလဲ အခက်သား။
ကျွန်မကတော့ အိမ်ထဲမှာ တရက်လောက် အပြင်မထွက်ပဲ နေရရင်တောင် နေမကောင်းချင် သလိုလို ဖြစ်တတ်သူမို့ …နှစ်ရှည်လများ ထောင်အခန်းကျဉ်းထဲမှာ အများအတွက် ဘ၀တွေ၊ အချိန်တွေ ပေးနိုင်သူတွေ ကို လေးစားချီးကျူးမိတယ်။
Ma Ma says: စကားလုံးတွေ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းလှပလွန်းလှပါပေတယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 45
မစုဥာဏ် says: ကျွန်မကလဲ Ma Ma ရဲ့ photo essays ခရီးသွားမှတ်တမ်းပုံ တွေ ကို (အထူးသဖြင့် “အမြင်ဆန်းချင် ရွာလှမ်းရှင်” လိုမျိုး မြန်မာ့အလှ ကို ဖော်ကြူးတဲ့ ပုံကောင်းကောင်းတွေ ကို ကြည့်ပြီး) ရိုက်တတ်လိုက်တာလို့ အားကျနေတာ။ မြန်မာ့အလှ ဆိုပြီး ပုံပြပွဲတွေ ဘာတွေ တောင် လုပ်သင့်တယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ကိုယ့်မှာတော့ အဲသလို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ရဲတဲ့ သတ္တိမရှိတာကြောင့် အဲဒီသတ္တိရှင်တွေကို လေးစားပါတယ်။
အသာစံရချိန်ကျရင်လည်း ကိုယ်ကျိုးဆက်စွန့်ရဲဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ညီရင် လူထုမေတ္တာပန်း ထာဝစဉ် ဆင်မြန်းရမှာပါ။
(ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဒေါ်စု လိုပေါ့)
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဆက်ဆက် ရေ
နည်းမျိုးစုံ နဲ့ ထိုးဖောက် ရာမှာ
ပထမဆုံး နည်း က pawn နယ်စားလေးတွေ နဲ့ အစားခံ ဖောက်ရပါတယ်။
တစ်ခြား အရုပ် တွေ က ပညာပါပါ နဲ့ ကာပေးနိုင်ရင်တော့ အဲဒီဖောက်ထွက်လာတဲ့ pawn လေး က တစ်ချိန် ပိုအားကောင်းတဲ့ ဘဝ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဖက် ကို ထိုးဖောက်ပြီး ပါသွား တဲ့ အကောင် လေးတွေ ကို ပြန်ကယ်ဖို့လဲ ကြိုးစားရပါတယ်။
ကစားပွဲထဲ မယ် ရဲဝံ့ပြီး ဥာဏ်သုံးတတ်ဖို့တော့ လိုပေမပေါ့။
ဒီတော့ အသေခံ pawn တွေကိုလဲ လေးစားသင့်/ လေးစားရပါတယ်။
မစုဥာဏ် says: မြစပဲရိုး ပေးတဲ့ ဥပမာ က တော်တော်ကောင်းတယ်။
အသေခံ pawn တွေ အများကြီး က နှစ်အကြာကြီး အစားခံခဲ့ တာကြောင့် လဲ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ရဲ့ ဘ၀ အခြေအနေ ကို ကမာက ပိုမို အာရုံစူးစိုက်လာစေပြီး၊ နောက်ပိုင်း ဦးခွန်ထွန်းဦး တို့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ လို နာမည်ကြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု တွေ ကို ပိုမို အထောက်အကူ ပြုစေခဲ့တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ တနွယ်ငင် တစင်ပါ နှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ…. နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ တင် မကပဲ သူတို့ ရဲ့ သားသမီးတွေ ၊ မိသားစုဝင် တွေပါ အနည်းနဲ့ အများ ပေးဆပ်ကြရတာမို့ …အဲဒီလို ဖြစ်နိုင်တာကို သိသိကြီးနဲ့ စွန့် စားရဲ၊ တော်လှန်ရဲ တဲ့ သူတွေ ကို
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4010
manawphyulay says: ပေးဆပ်သူတွေအတွက် အမြဲ ဂုဏ်ယူ လေးစားနေမိပါတယ်…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7169
kyeemite says: .ကောင်းလိုက်တဲ့ခရစ္စမတ် ကဗျာလေးပါ
.ဆရာအောင်သင်းပြောဖူးတဲ့“ ရှေ့လူတွေ မစားပဲစွန့်ခဲ့လို့ နောက်လူတွေမစွန့်ပဲစားနေရတာတဲ့”
.ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံသူတွေများစွာကြောင့်(သိပ်အကောင်းချည်းမဟုတ်သေးပေမဲ့) အထိုက်အလျှောက်
.ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ၊ အသက်စတေးခံခဲ့ကြသူ သူရဲကောင်းများကိုလေးစားပါတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: .ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ၊ အသက်စတေးခံခဲ့ကြသူ သူရဲကောင်းများကိုလေးစားပါတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: ကိုယ်မလုပ်နိုင်တဲ့.. မလုပ်ရဲတဲ့အရာတွေကို လုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ရဲတဲ့ သူရဲကောင်းတွေကို လေးစားမိပါတယ်..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1680
အောင် မိုးသူ says: မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာပေါ့……..အခုတော့
Comments By PostJapan နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Zero-Emissions Bar - kai"မပြန်လမ်း"တဲ့လား - ပြန်ချင်စိတ်က အဓိကပါကွယ်... - kai - Thint Aye Yeikဇော်ဂျီယူနီမှသည် ညဈေးဆီသို့ - manawphyulay - ခင်ခမှော်ကမ္ဘာထဲကို ခေါ်သွားဦးမယ် ဂျေကေရဲ့ Fantastic Beasts - manawphyulayရှေ့တန်းမှ အမှတ်တရများ - kai - YUYA MONဗီယက်နမ်လား….အနောက်နိုင်ငံလား…???? - သျှားသက်မာန် - သျှားသက်မာန်ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဟနွိုင်းမြို့မှတောင်ပိုင်း ဟိုချီမင်းမြို့ သို့ ခရီး - သျှားသက်မာန် - သျှားသက်မာန်အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ - ကထူးဆန်း - Thint Aye Yeikဂွဇွတ်တောင်ပေါ်မှ မျှစ်ကြော်ပြုံး၏ စိန်ခေါ်သံ - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - ၀င့်ပြုံးမြင့်" ငါ့ ကြောင့် ငါ အခါခါသေရ၏ " - kai - Thint Aye Yeikကျုံထော်ရေတံခွန်ပြန်ဖွင့်ပြီ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikသေးတာက တခါတလေ ကြီးတာထက် အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်တဲ့ အိမ်သေးသေးလေးတွေ - သျှားသက်မာန် - kaiသင့်ရဲ့ သဲကန္တာရ အသေးစား စွန့်စားခန်းအတွက် သဲသောင်ပြင် ၅ ခု - သျှားသက်မာန် - kaiအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ - kai - kaiမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths IXXX - Kyaemonမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVII - Kyaemon - Kyaemonမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် - - Myitsone Myths and Truths II - Kyaemon - Kyaemonမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် - - Myitsone Myths and Truths - Kyaemon - Kyaemonမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths IXX - Kyaemon - KyaemonHot ဖြစ်နေတဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ - Thint Aye Yeikမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVIII - Kyaemonမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVI - Kyaemon - Kyaemon" မော တဲ့ နေ့" - Thint Aye Yeik*** စင်ကာပူက အပြာတန်း *** (သို့) Geylang - Thint Aye Yeik - သျှားသက်မာန်" စိတ်သုဉ်းခြင်း " - Thint Aye Yeik - ဂျစ်စူ" ငြိမ်းချမ်းရေး ရေ " - Thint Aye Yeik - aye.kkNew York, Central Park ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက် (၁၂) ခု - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikအစစ် - ၀င့်ပြုံးမြင့် - Anti Moeဖိတ်ခေါ်စမ်းပါရစေ - aye.kk - aye.kkလွမ်းရိပ်ညို - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - ဖိုးသာထူး" စိတ်ကြီးဝင်ခြင်း " - aye.kk - ကိုပေါက်(မန္တလေး)" စိတ်ခါးခြင်း " - kai - aye.kkမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXV - Kyaemon - KyaemonCategory	Arts & Humanities
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10Anzartone (95532 Kyats )alinsett (93104 Kyats )kyeemite (91328 Kyats )weiwei (83114 Kyats )SP (80791 Kyats )padonmar (76894 Kyats )blackchaw (76343 Kyats )Foreign Resident (59014 Kyats )monmon (58576 Kyats )Northern Onestar (56676 Kyats )FB	FB
Myanmar News (Ygn News)